YEYINTNGE(ကနဒေါ): Thursday, June 28
အီဂျစ်များ ယနေ့ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြမှုနောက်ဆက်တွဲနှင့် ၀ါဒဖြန်မှုများ
Thiri on Thursday, June 28, 2012 at 8:13pm
ဒီနေ့ ( ၂၈၊၆၊၂၀၁၂) အီဂျစ်မှာ အီဂျစ်လူမျိုးအယောက် ၂၀ လောက်ကစပြီး မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်..ဆန္ဒပြရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ မြန်မာပြည်မှာ မွတ်ဆလင်တွေကို မြန်မာအစိုးရနဲ့ မြန်မာလူမျိုးများက နိုင့်ထက်စီးနင်း ဖိနှိပ်ပြီး ယခု အာရကန်နှင့် အရေးအခင်းမှာ မွတ်ဆလင်တွေကို တစ်ဖတ်သတ်ဖိနှိပ်သတ်ဖြတ်နေလို့ဖြစ်တယ်လို့ သူတို့ကဆိုပါတယ်။ အယောက် ၂၀ လောက်ကစလိုက်တဲ့ ဆန္ဒပြမှုဟာ အယောက် ၂၀၀ လောက်ထိတိုးပြီး အီဂျစ်ရဲများကပါ ထိမ်းသိမ်းခဲ့ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြားသိရသလောက်ကတော့ မြန်မာသံရုံးနဲ့ ဆန္ဒပြသူများဘက်မှ ခေါင်းဆောင်အချို့တို့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာသံရုံးဘက်မှ အရေးအခင်းဖြစ်ပွားရခြင်းနဲ့ အခြေအနေတို့ကို ရှင်းပြသော်လည်း ဆန္ဒပြပွဲခေါင်းဆောင်တို့က ထိုအဖြစ်အပျက်များအားလုံးကို ၄င်းတို့သိပြီးသားဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ထိုအဖြစ်အပျက်များနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး အီဂျစ်ပြည်သူတို့ကို မြန်မာတို့က တောင်းပန်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာသံရုံးမှ ထိုကိစ္စများအတွက် များစွာဝမ်းနည်းပါကြောင်း ပြောသော်လည်း ထိုလူတို့က လက်မခံနိုင်ကြောင်းနှင့် မြန်မာတို့မှ သတင်းစာများမှ တရားဝင် တိုင်းသိပြည်သိ တောင်းပန်မှသာ လက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ထိုသို့မတောင်းပန်လျင် တာ့ဟ်ရီးယား စကွဲမှ လူများအား သံရုံးရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။ ....ဒါတွေကတော့ ယနေ့ကြားသိထားသမျှ အခြေအနေတွေပါ။ မနက်ဖြန် ဘုရားဝတ်ပြုပြီးချိန်တာ့ဟ်ရီးယား စကွဲမှအပြန် ညနေ၅ နာရီမှာ ပြန်လည် ဆန္ဒပြကြဦးမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်.။ ဒီနေ့ ကိစ္စဖြစ်ပွားအပြီးမှာတော့ ကျမတတ်နိုင်သလောက် သဲလွန်စရှာဖွေကြည့်မိတဲ့အခါမှာ အီဂျစ်တွေရဲ့ ဂရုတစ်ခုကနေ ဒီလို ၀ါဒဖြန့်တာကို အီဂျစ်ပေါင်းများစွာက ပြန်ရှဲနေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမကလဲ အာရဗီစာ၊ စကားမတတ်တဲ့အခါကျတော့ ဂူးဂဲလ် အကူအညီနဲ့ပဲ ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်.။ ဒါပေမယ့် ခင်မင်တဲ့ အီဂျစ်တွေကတဆင့် ဆက်လက်စုံစမ်းပြီး သတင်းရသလောက် ဖြန့်ပေးပါမယ်.။ တကယ်တော့ ဒီနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ ကျမတို့အာရှတိုက်သားလူနည်းစုတွေဟာ အမြဲသတိကြီးကြီးနဲ့နေကြရတာပါ.။ ဆန္ဒပြတဲ့ သံရုံးဘက်ကိုကိုယ်တိုင်မသွားနိုင်သည့်တိုင်အောင်(သွားခဲ့ရင် အသက်ရှင်ဖို့ အာမခံချက်မရှိပါဘူး) ဘာပဲပြောပြော တတ်နိုင်သလောက်တော့ ရေးပေးပါမယ်.။ ဒီကိစ္စဟာ ကျမတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း မရိုးသားပါဘူး.။ တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်... ဘာလို့အီဂျစ်ကိုအရင် စတင်ပြန့်နှံ့စေသလဲဆိုရင် အီဂျစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ နိုင်ငံအခြေအနေအရ အီဂျစ်လူမျိုးတွေသွေးဆူနေတဲ့ အချိန်တစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူအချို့ဟာ နိုင်ငံရေးအသုံးချသူအချို့ကြောင့် နေ့တွက်နဲ့ တာ့ဟ်ရီးယား စကွဲမှာ
ဆန္ဒပြနေသူတွေလဲ အဆင်သင့်ရှိနေတာက တကြောင်း၊ နောက်အီဂျစ်ဟာ လောလောလတ်လတ် မွတ်စလင်ဘရားသားဟုဒ်မှ သမတရာထူးရရှိထားတာက တစ်ကြောင်းတို့ကြောင်း အင်မတန် ဇာတ်လမ်းစလို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေကို အသုံးချသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြား စော်ဘွားတိုင်းပြည်တွေကို ဒီလို
ဆန္ဒပြဖို့ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အီဂျစ်မှာ ကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားပြီးပြီဆိုရင်တော့ တခြားအစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတွေဆီက ထောက်ခံမှုရဖို့ မခက်တော့ပါဘူး။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးတိုက်ကွက်လို့ ကျမတော့ မြင်ပါတယ်.။ အောင်မြင်ရင် မြန်မာပြည်အဖို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ၀ိုင်းဖိအားပေးတာမျိုးခံလာရနိုင်စရာရှိပါတယ်.။ ဒီကိစ္စကို အားလုံးက ၀ိုင်းပြီးအလေးအနက်ထားပြီး စဉ်းစားအဖြေရှာကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်..။
ဒါကတော့ အီဂျစ် ပေ့ခ်ျတစ်ခုမှာရေးပြီး ပြန့်နှံ့နေတာကို မူရင်းအာရဘီနဲ့ ဂူးဂဲလ် ဘာသာပြန်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Muslims in Burma .. # Are facingawar of extermination # HelpArakan
Hieier and post issue
Since aboutaweek's Muslims live Arakan State in western Burma catastrophic situations, after it turned into sectarian clashes in the Territory to all-out war against the Muslims in Burma. Several days ago, killing ten of the Muslims of Burma when they returned from pilgrimage at the hands of an angry Buddhist groups beat them to death and on the back of death ofayoung Buddhist.
For several days roaming groups of armed with knives and bamboo sticks Almsnonh many regions and towns of the state of Arakan kill all of the faces of Muslims and burned and destroyed hundreds of homes, especially in the area "Mongdao" in the north of the state, in addition to the city of "Sittwe," the capital of Arakan.
Despite the announcement by the authorities in Rangoonastate of emergency in the state, and the spread of the security forces in the vicinity of mosques and Buddhist temples, are still ongoing bloody confrontation between the Muslim minority and the majority Buddhist. That was why the United Nations to withdraw all of its employees on Monday of the state.
Despite all this talk, the official media in Burma than7dead and 17 wounded just since last Friday, which means they completely ignore the victims among the Muslims of Burma over the numbers for that much.
The Arakan State (which isabar earthy narrow located on the Bay of Bengal) link between Asia, Muslim, Hindu, Asian Buddhism, where it is almost virtually impossible to coexistence between the majority Buddhist "Alrakhin" and the Muslim minority oppressed "Roheenj Yas."
The Muslim minority in Burma, according to the United Nations more persecution of minorities in the world and the suffering and vulnerable to systematic oppression of successive regimes in Burma.
The back side of this suffering to the fact that some Muslims of Burma presented with the British forces invaded Burma in the nineteenth century, making them vulnerable to persecution and always repression since the independence of Burma in 1948.
During 1978, migrated more than 200,000 Muslims from Burma to neighboring Bangladesh to escape the fierce campaign waged by the Burmese troops against them.
In 1982, authorities issuedalaw in Burma to withdraw citizenship of Muslims in Burma, which made them foreigners and refugees living in their country of origin. In 1991 and 1992, Burma's Muslims subjected again toagenocidal campaign of the Burmese troops, prompting many of them to resort to neighboring Bangladesh.
The rest who refused immigration Snov are faced with injustice and marginalization of unimaginable Kalochgal labor, confiscation of land and property, and the denial of marriage or move from one place to another without the consent of an official from the Burmese authorities, in order to induce them to leave the country permanently.
Asaresult, Today, more thanamillion Burmese Muslim refugees outside their country oppressed, compared to about 750 thousand within Burma itself.
Bloody confrontations last taking place in Arakan State is definitely the product ofaculture of religious and ethnic hatred toward Muslims in Burma, but also an attempt by the Burmese authorities to pay the leader of the opposition, "Aung San Suu Kyi" to do statements can be used popularly against it such as calling for calm, for example, or other things that can be considered asakind of sympathy for the Muslim minority pariah at every level in Burma.
War rabid targeting Muslims of Burma moved for several days toasocial networking "Facebook and Twitter" where filled pages Logo attack stinging against "Alcalar" These foreign-skinned black "and" Muslim terrorists "to the extent that some displays Awards on Logo" to anyone who killsaMuslim from Arakan State. "
It is strange here is that everyone here (diplomats and men of culture and the stars of cinema ... etc) compete in the abuse and insults to the Muslim minority in Burma.
And confirms many of the witnesses that Buddhism paramilitary gangs that target Muslims moving to assist and protect the security forces in Burma.
Muslims in Burma - or what remains of them alive - live today between the jaws of pliers, they are facingawar of extermination comprehensive in their native Burma, and wanted them to escape his own escape from death at the hands of gangs of Buddhism in Burma addressed by the border guards Bengali to bring him back again to life Burmese hell.
Several days ago, objected to the border guards of the Bangladesh primitive boat carries on board more than 300 Muslim refugees from Burma fleeing from their country of origin, which forced them to return to where they came from.
مسلمو #بورما.. يواجهون حرب إبادة#HelpArakan
شيييير وانشر القضية
منذ حوالي أسبوع يعيش مسلمو ولاية آراكان الواقعة في غرب بورما أوضاعا كارثية ، بعدما تحولت المواجهات الطائفية التي يشهدها الإقليم إلى حرب شاملة ضد المسلمين في بورما . فقبل عدة أيام قتل عشرة من مسلمي بورما لدى عودتهم من العمرة على يد مجموعات بوذية غاضبة قامت بضربهم حتى الموت وذلك على خلفية مقتل شابة بوذية .
ومنذ عدة أيام تجوب مجموعات مسلحة بالسكاكين وعصي الخيزران المسنونة العديد من مناطق وبلدات ولاية أراكان تقتل كل من يواجهها من المسلمين وتحرق وتدمر مئات المنازل ، وخاصة في منطقة " مونغداو " في شمال الولاية ، إضافة لمدينة "سيتوي" عاصمة ولاية آراكان .
وعلى الرغم من إعلان السلطات في رانغون حالة الطوارئ في الولاية ، وانتشار قوات الأمن في محيط المساجد والمعابد البوذية ، مازالت المواجهات الدموية مستمرة بين الأقلية المسلمة والغالبية البوذية . وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى سحب جميع موظفيها يوم الاثنين الماضي من الولاية .
رغم كل ذلك تتحدث وسائل الإعلام الرسمية في بورما عن7قتلى و17 جريحا فقط منذ يوم الجمعة الماضي ، وهو ما يعني أنها تتجاهل بشكل تام الضحايا في صفوف مسلمي بورما الذين تزيد أعدادهم عن ذلك بكثير .
وتعتبر ولاية أراكان ( والتي هي عبارة عن شريط ترابي ضيق يقع على خليج البنغال ) همزة الوصل بين آسيا المسلمة والهندوسية وآسيا البوذية ، حيث يكاد يكون من شبه المستحيل التعايش بين أغلبية بوذية " الراخين " وأقلية مسلمة مضطهدة " روهينج ياس " .
وتعتبر الأقلية المسلمة في بورما بحسب الأمم المتحدة أكثر الأقليات في العالم اضطهادا ومعاناة وتعرضا للظلم الممنهج من الأنظمة المتعاقبة في بورما .
ويعود جانب من هذه المعاناة إلى كون بعض مسلمي بورما قدم مع القوات البريطانية لدى اجتياحها بورما في القرن التاسع عشر الميلادي ، مما جعلهم عرضة على الدوام للاضطهاد والقمع منذ استقلال بورما عام 1948 .
وخلال عام 1978 هاجر أكثر من 200000 من مسلمي بورما إلى بنغلاديش المجاورة هربا من الحملة الشرسة التي شنتها ضدهم القوات البورمية .
وفي عام 1982 أصدرت السلطات في بورما قانونا يقضي بسحب الجنسية من مسلمي بورما ، وهو ما جعلهم يعيشون أجانب ولاجئين في بلدهم الأصلي . وفي عامي 1991 و1992 تعرض مسلمو بورما مجددا لحملة إبادة من القوات البورمية ، وهو ما دفع الكثير منهم إلى اللجوء لبنغلاديش المجاورة .
أما البقية التي رفضت الهجرة فتواجه صنوفا من الظلم والتهميش لا يمكن تصورها كالأشغال الشاقة ، ومصادرة الأراضي والممتلكات ، والحرمان من الزواج أو التنقل من مكان لآخر إلا بموافقة رسمية من السلطات البورمية ، وذلك بهدف دفعهم إلى مغادرة البلاد بشكل نهائي .
وكنتيجة لذلك يعيش اليوم أكثر من مليون مسلم بورمي خارج بلادهم كلاجئين مضطهدين ، مقابل حوالي 750 ألفا داخل بورما ذاتها .
المواجهات الدموية الأخيرة التي تشهدها ولاية آراكان هي بالتأكيد نتاج ثقافة الكراهية الدينية والعرقية اتجاه مسلمي بورما ، لكنها كذلك محاولة من السلطات البورمية لدفع زعيمة المعارضة " أونغ سان سو " للقيام بتصريحات يمكن توظيفها شعبيا ضدها كالدعوة للهدوء مثلا ، أو نحو ذلك مما يمكن اعتباره نوعا من التعاطف مع الأقلية المسلمة المنبوذة على كل المستويات في بورما .
الحرب المسعورة التي تستهدف مسلمي بورما انتقلت منذ عدة أيام إلى شبكات التواصل الاجتماعي " الفيسبوك وتويتر " حيث امتلأت صفحات الفيسبوك بالهجوم اللاذع ضد " الكالار " هؤلاء الأجانب ذوي البشرة السمراء " "والمسلمين الإرهابيين " لدرجة أن البعض يعرض جوائز على الفيسبوك" لمن يقتل مسلما من ولاية آراكان " .
والغريب هنا أن الجميع هنا ( دبلوماسيون ورجال ثقافة ونجوم سينما ...الخ ) يتسابقون في الإساءة وكيل الشتائم للأقلية المسلمة في بورما .
ويؤكد العديد من شهود العيان أن العصابات البوذية شبه العسكرية التي تستهدف المسلمين تتحرك بمساعدة وحماية قوات الأمن في بورما .
مسلمو بورما – أو ما تبقى منهم على قيد الحياة – يعيشون اليوم بين فكي كماشة ، فهم يواجهون حرب إبادة شاملة في بلدهم الأصلي بورما ، ومن أراد منهم النجاة بنفسه هربا من القتل على يد العصابات البوذية في بورما يتصدى له حرس الحدود البنغالي ليعيده مجددا إلى حياة الجحيم البورمية .
فقبل عدة أيام اعترض حرس الحدود التابع لبنغلاديش زورقا بدائيا يحمل على متنه أكثر من 300 لاجئ من مسلمي بورما فارين من بلدهم الأصلي ، حيث أرغموهم على العودة من حيث أتوا .
BY YeYint Nge ... 6/28/20120comment
အခြေအနေဆိုတာက နေ့ချင်းညချင်းမှာ ပြောင်းသွားနိုင်တာမျိုး။
rအိန္ဒိယထောက်လှမ်းရေးက ဘုံဘေတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ အဓိကဆရာကြီး အန်ဆာရီကို တနေ့က နယူးဒေလီ လေဆိပ်မှာ ဖမ်းလိုက်နိုင်ခဲ့ပါသတဲ့။ အန်ဆာရီဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား မွတ်ဆလင်ဖြစ်ပေမဲ့ ပါကစ္စတန်မှာ စစ်ပညာသင်ပြီး အိန္ဒိယကို ပြန်တိုက်တဲ့သူပါ။
၂ဝဝ၈ ဘုံဘေတိုက်ခိုက်မှုတုန်းက သူဟာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ကရာချိမြို့က အဲဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးရုံးကနေ ဘယ်လိုတိုက်ရမယ် ဘယ်ကိုသွားရမယ် ဘာတွေလုပ်ရမယ် ဆိုတာကို ညွှန်ကြားချက်ပေးခဲ့သူပဲတဲ့။
ဒီလူဟာ အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာ ဆော်ဒီအာရေးဗျကိုသွားပြီး ငြိမ့်နေသတဲ့၊ ဒီတော့ အိန္ဒိယထောက်လှမ်းရေးက သူမှန်းသိသိချည်းနဲ့ သူ့ကိုလက်မလှမ်းနိုင်ဘူးပေါ့။
အန်ဆာရီကိုရဖို့ အိန္ဒိယဟာ ဆောဒီဘုရင့်အစိုးရနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ညှိခဲ့ပေမဲ့ ဆော်ဒီက အန်ဆာရီကို အိန္ဒိယထောက်လှမ်းရေးလက်ထဲ အပ်ဖို့ ငြင်းဆန်နေခဲ့ပါသတဲ့၊ ဒါကလည်း ပါကစ္စတန်က အန်ဆာရီကို အိန္ဒိယလက်ထဲမအပ်ပဲ သူတို့ကို ပေးဖို့တောင်းနေလို့ပါပဲ။
ပါကစ္စတန်ဒီလိုတောင်းတာက ဒီဘုံဘေ တိုက်ခိုက်မှုဟာ ပါကစ္စတန်ထောက်လှမ်းရေး ISI နဲ့ ထဲထဲဝင်ဝင်ပတ်သတ်နေလို့ပါပဲ။ ပြောရမယ်ဆို ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းက စီစဉ်တာပဲ။
ဒါကိုအိန္ဒိယကလည်း သိတယ် ဒါပေမဲ့ သံခင်းတမန်ခင်း ပြဿနာပိုတက်မှာစိုးလို့ ခိုင်လုံတဲ့ သက်သေကို အရလိုနေတာပဲ၊ ဒီတော့ ပါကစ္စတန်က သူတို့လုပ်ရပ်မပေါ်အောင် နာဆာရီကို အိန္ဒိယလက်ထဲ မပါစေပဲ သူတို့ကြားဖြတ်ဆွဲချင်တယ်။ ပြောရမယ်ဆို အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံတော်အချင်းချင်းဆိုတော့ ပါကစ္စတန်က ပိုအလေးသာတာပေါ့။
ဒီလို ဆော်ဒီဟာ နှစ်ဖက်ကြားဗျာများနေချိန်မှာ ကြားဝင်လာသူက ဆြာကြီး အမေရိကန်ပေါ့။ ဆော်ဒီဟာ အီရန်နဲ့ အယ်ကေဒါးကိုကြောက်တာမို့ အမေရိကန်ကို အဖေတော်ထားတဲ့ နိုင်ငံပဲ။ နောက်ဆုံး မွေးစားဖေကြီး အမိန့်နဲ့ အိန္ဒိယက အန်ဆာရီကိုရသွားတယ်။
အဲဒီမှာ လုံးဝထင်သာမြင်သာရှိသွားတာက အမေရိကန်ဟာ အရင်က သူ့ရဲ့မွေးစားသားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပါကစ္စတန်နဲ့ အိန္ဒိယအားပြိုင်မှုမှာ အိန္ဒိယဘက်ရပ်လိုက်တာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ဟိုအရင် စစ်အေးခေတ်ကဆို ပါကစ္စတန်နဲ့ အမေရိကန်ဟာ ဘုံရန်သူ ဆိုဗီယက်ကို အံတုဖို့ ကျောချင်းကပ်ခဲ့ကြတယ်၊ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယစစ်တစ်ပွဲတိုက်ဖူးတဲ့ ရန်သူကြီးတွေ၊ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်က စစ်လေးကြိမ်တိုက်ဖူးတဲ့ ခါးသီးတဲ့ ရန်ကြွေးရန်စရှိကြသူတွေ၊ တရုတ်နဲ့ ဆိုဗီယက်က လက်ဝဲဆရာကြီးနေရာလုရင်း စစ်ဖြစ်ဖူးတယ်၊ ဆိုဗီယက်နဲ့ ပါကစ္စတန်က အာဖဂန်ကို ဆိုဗီယက်ဝင်သိမ်းတာကအစပြုပြီး မကျေလည်ဘူး၊ ဒီတော့ တရုတ်နဲ့ ပါကစ္စတန်က ဘုံရန်သူဆိုဗီယက်ကြောင့် ဘော်ဒါတွေဖြစ်သွားရော၊ ဒီကနေ ဆိုဗီယက်ရဲ့ ပြိုင်ဘက် အမေရိကန်နဲ့ ပလူးပလဲလုပ်ကြတယ်။
အိန္ဒိယကတော့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး နေရူးကစပြီး ဖေဘီယန်ဆိုရှယ်လစ်တွေဆိုတော့ ဆိုဗီယက်နဲ့ နီးစပ်ခဲ့တယ်၊ ဒီကြားထဲ တရုတ်နဲ့ ဆိုဗီယက်ရန်ဖြစ်ထားတော့ ရန်သူရဲ့ရန်သူဟာ မိတ်ဆွေဆိုပြီး ဆိုဗီယက်ရဲ့ ဘော်ဒါဘော်ကျွတ်သွားလုပ်ရော၊ ဒီတော့ အမေရိကန်နဲ့ အစေးမကပ်ဘူး။
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ အားလုံး ကပြောင်းကပြန်ဖြစ်ကုန်တယ်။
ပါကစ္စတန်ဟာ သူထောင်ပေးထားတဲ့ တာလီဘန်နဲ့ အမေရိကန်စစ်ဖြစ်တော့ သူ့တပည့်တွေဘက်ရပ်တည်ရင်း အမေရိကန်နဲ့အငြိဇယားတွေရှိလာတယ်၊ တရုတ်ဟာ ဆိုဗီယက်နေရာဝင်ယူလာပြီး အမေရိကန်ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ကြီးဖြစ်လာတယ်၊ အိန္ဒိယနဲ့ အမေရိကန်ဟာ မွတ်ဆလင်အကြမ်းဖက်တွေရဲ့အရေးနဲ့ တရုတ်ရဲ့ကြီးထွားလာတဲ့ အန္တရာယ်ကြောင့် ဘော်ဒါတွေဖြစ်လာကြတယ်။ ပါကစ္စတန်ဟာ သူရန်သူဟောင်း အိန္ဒိယဟာ အမေရိကန်ပိုနီးစပ်လာတော့ တရုတ်နဲ့ ပိုပေါင်းပြလာတယ်။
အဲဒီမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဟာ စဉ်းစားစရာအနေအထားကို ရောက်လာရော။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ပါကစ္စတန်ကနေ ခွဲထွက်ဖို့ အဓိကပံ့ပိုးပေးတဲ့သူက အိန္ဒိယပဲ (ပံ့ပိုးပေးတာထက် ဝင်တိုက်ပေးတာဆိုရင် ပိုမှန်မယ်)။ လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာတော့ ဘင်္ဂလားကျားကြီးလို့ ထင်ရှားတဲ့ ရှိတ်မူဂျီဘာရာမန် (ရှိတ်မူဂျစ် - လက်ရှိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဝန်ကြီးချုပ် ရှိတ်ဟာဇီနာရဲ့အဖေ) ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို အိန္ဒိယအစိုးရသဘောကျတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်လမ်းကြောင်းနဲ့ ဦးဆောင်တယ်၊ နောက်တော့ ဆိုရှယ်လစ်တပါတီစနစ် နဲ့တောင် ချီတက်လိုက်သေးတယ်။ အိန္ဒိယနဲ့ ဆိုဗီယက်က အကူအညီတွေအများကြီးပေးတာပေါ့။
ဒီတော့ တောင်အာရှမှာ ပါကစ္စတန်ကလွဲရင် အမေရိကန်ကန်ခြေချစရာနေရာမရှိဘူး ဖြစ်လာတယ်။ ဒီတော့ စီအိုင်အေက အခါပေးပြီး စစ်တပ်ကို အာဏာသိမ်းခိုင်ရော။ ဒီပွဲမှာ ရှိတ်မူဂျစ်အသတ်ခံရတယ်၊ အသတ်ခံရတာမှ တမိသားစုလုံးပဲ၊ ကံကောင်းထောက်မပြီး ရှိတ်ဟာဇီနာက ဥရောပရောက်နေလို့ မဟုတ်ရင် လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ကို မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။
စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့၇ှ်ဟာ အိန္ဒိယနဲ့ ဆိုဗီယက်ကို ခြေစုန်ကန်ပြီး အမေရိကန်တပည့်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်၊ အဲဒီမှာပေါ့ အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းပြီး အစ္စလာမစ်နိုင်ငံတော်တောင် ထူထောင်လိုက်သေးတယ်၊ သမ္မတက ဇီယာရာမန် (ပြုတ်သွားတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ခါလီဒါဇီယာရဲ့လင်)။ အဲ မကြာဘူး သူလဲ အာဏာအသိမ်းခံရ အသတ်ခံရတာ ဖြစ်ပြန်ရော။ ဒီမှာ အချို့က ဆိုဗီယက်နဲ့ အိန္ဒိယပယောဂမကင်းဘူးလို့ ဆိုကြတယ်။
နောက်တက်လာသူက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအာရှတ်၊ အာရှတ်က သူ့ကိုယ်သူ ဇီယာရာမန်ရဲ့ သစ္စာခံလို ပြောပေမဲ့ လေ့လာသူတွေ ဇီယာရာမန်ကိုသတ်ဖို့ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်တဲ့သူဟာ အာရှတ်ပဲလို့ ယုံကြည်ကြတယ်။
ဘယ်လို့ဖြစ်ဖြစ် အာရှတ်ဟာ သူ့လက်ထက်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို အရှေ့နဲ့ရော အနောက်နဲ့ပါ ပေါင်းခဲ့ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားစစ်တပ် ကုလသမဂ္ဂမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်တာ သူ့လက်ထက်က စတာပေါ့။
ဒီလိုပေါင်းတော့ အမေရိကန်ရော ဆိုဗီယက်ဆီကပါ အကူညီတွေရတယ်၊ အနုမြူဓါတ်အားပေး စက်ရုံတွေဘာတွေတောင် ဖြစ်လာတယ်။
ဆိုဗီယက်ညောင်းသွားတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲ့ အဓိကပါတနာဟာ အမေရိကန်ဖြစ်လာတာပေါ့၊ အိန္ဒိယနဲ့တော့ ပေါင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ သိပ်အစေးမကပ်လှပါဘူး၊ ဒီတော့ တရုတ်နဲ့လည်း အဆက်အသွယ်တွေ ကောင်းလာတယ်။
နောက်တော့ စောစောကပြောသလို ကမ္ဘာ့အခြေနေပုံစံပြောင်းသွားပြီး အမေရိကန် နဲ့ အိန္ဒိယကတစ်ဖက် တရုတ်ကတစ်ဖက် တောင်အာရှမှာဖြစ်လာတဲ့အခါ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဟာ အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်ရဲ့ နယ်မြေလုရာဖြစ်လာတယ်။
တရုတ်ရဲ့ အိန္ဒိယကို ပတ်သိုင်းဝန်းချုပ်မဲ့ ဗျူဟာ The ring of pearls ထဲမှာပါတဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။
ပါကစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာ နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ပိုက်ဆံတွေပစ်သွင်း လက်နက်ကူညီ ကုလသမဂ္ဂမှာဗီတိုထီးမိုး စတဲ့ နည်းတွေနဲ့ ဆိပ်ကမ်းတွေဆောက်လာတဲ့ တရုတ်ရဲ့ ဗျူဟာကို အိန္ဒိယတင်မက အမေရိကန်ပါ လန့်လာတယ်၊ ဒီအတိုင်းဆို တရုတ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေအုပ်စုကြီးတွေ ထူထောင်ပြီးရင် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဟာ တရုတ်လက်ထဲရောက်သွားနိုင်တယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဟာ တရုတ် အမေရိကန်နဲ့ အိန္ဒိယကြားမှာ ကစားရင် အကျိုးအမြတ်တွေရနေတာ။
မြန်မာမြေပေါ်သာ ခြေချနိုင်လို့ကတော့ တရုတ်နောက်ကျောကြီး ပွင့်ပြီပဲ။
တရုတ်က လက်သွက်သွက်နဲ့ ကျောက်ဖြူကို တင်ကြိုဝိုက်ထားပေမဲ့ မြန်မာရဲ့အခြေနေက တရုတ်လိုချင်တဲ့ပုံစံကနေ တဖြေးဖြေးပြောင်းလာတယ်။
အမေရိကန်က ဒါကို ကောင်းကောင်းသိတယ်၊ ဒါကြောင့် တောင်ပြောမြောက်ပြော ပြောနေပေမဲ့ ဒီစစ်တကောင်းဘင်္ဂလား အရေးမှာ နှာစီးပြနေတယ်၊ ဟိုလိုဒီလိုနဲ့ နှစ်နိုင်ငံအေးအေးဆေးဆေး စကားပြောကြဖို့ တိုက်တွန်းနေတယ်။
တကယ်လို့သာ အမေရိကန်ဟာ သူအရင်ကရပ်တည်ထားခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာဟာ မြန်မာပြည်သား ဆိုတဲ့အယူအဆမှာပဲ ကျောက်ချပြီးရပ်တည်နေရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ဒုက္ခသည်တွေ လက်ခံဖို့ ဘာအကြောင်းနဲ့ ပြောနေမလဲ။
ကျနော့်အထင် တကယ်လို့သာ ကျနော်တို့နိုင်ငံသာ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးမှာ ဒီထက်ပိုကောင်းလာရင် အနောက်ဘက်က စီးပွားတွေများလာရင် ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ခေါတောငလိမ်တွေရဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းမျက်နှာစာက ပုံစံတွေပြောင်းသွားနိုင်တယ်။
အမေရိကန်ကို အရမ်းအထင်ကြီးနေတာတော့မဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ လက်ရှိအခြေအနေအထိ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကို သူတို့ဟာ လိုသလိုပုံဖေါ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိနေတယ်။
အခုခေတ်မှာ ဟိုတုန်းကလို ဆယ်စုနှစ် ရာစုနှစ်နဲ့ စောင့်စရာမလိုတော့ဘူး အနေအထားနဲ့ အချိန်အခါအပေါ်မူတည်ပြီး အခြေအနေဆိုတာက နေ့ချင်းညချင်းမှာ ပြောင်းသွားနိုင်တာမျိုး။
အမေစုနဲ့ပြင်သစ်ကို ရောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေ တွေ့ ဆုံ
Published on Jun 27, 2012 by maykhalar
အမေစုနဲ့ပြင်သစ်ကို ရောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေ တွေ့ ဆုံကြတယ် ။ဥရောပခရီးစဉ်မှာ အမေစု စိတ်ကြည်လင်မှု အရှိဆုံးလို့ သုံးသပ်တယ် ။ လာတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေအားလုံးလည်း စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့အနာဂါတ်မြန်မာပြည်အတွက် ဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားကြတယ် ။ မြန်မာသံရုံးက အနက်ဝတ်စုံနဲ့လူ ၂ ယောက်လည်း လာပြီး ဂုဏ်ပြုတာလား။ သတင်းယူတာလားမသိဖူး ။ သတင်းမှားတွေ မတင်ပြနိူင်အောင် ဗီဒီယို နဲ့အားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ထားတယ် ။
ဝေစန္ဒာ | ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၀၁ မိနစ်
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဥရောပ ငါးနိုင်ငံသို့ ၁၆ ရက်ကြာ ခရီးလှည့်လည်ပြီး ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့
ပြန်လည် ရောက်ရှိလာမည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လူအမြောက် အများဖြင့် ကြိုဆိုရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း နေအိမ်
လမ်းတလျှောက် ဝဲယာတွင် အင်္ကျီ အနီရောင်များ ဝတ်ဆင်ကာ ခွပ်ဒေါင်းအလံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအလံများ ကိုင်ဆောင်၍ ပြည်သူ များက ကြိုဆိုရန် စီစဉ်နေသည်ဟု စီစဉ်နေသူတဦးဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ဦးနေမျိုးဇင် က ပြောသည်။
အနောက်နိုင်ငံများတွင် နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု အပါအဝင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲများ လက်ခံရယူပြီး ပါလီမန်များ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များက တလေးတစား ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုခြင်းခံရသော မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်အား
ပြည်သူများကလည်း ဂုဏ်ယူစွာကြိုဆိုကြသည်ကို ကမ္ဘာက သိစေရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု စီစဉ်သူများက ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ ကြိုဆိုရေးစီစဉ်ရာတွင် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် G Wave မှ လူငယ်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများကပါ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်တွေတွင် ဘင်္ဂါလီများကို နေရာပြောင်းရွှေ့
ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုများ ထပ်မံ မပေါ်ပေါက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ အောင်မင်္ဂလာ ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သော ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများကို နေရာပြောင်းရွေ့ နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီမှ ပါတီဝင် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ဘင်္ဂါလီ ၅၀၀ ဦးလောက်ကိုတော့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး သွားပြီလို့ သိရတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ယခု ပြောင်းရွေ့နေသော ဘင်္ဂါလီများမှာ ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ပွားစဉ်က ဝင်ရောက် ခိုလှုံနေသော ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများသာ ဖြစ်ပြီး မူလနေထိုင်သူများ မပါဝင်သေးကြောင်း အဆိုပါ ပါတီထံမှ သိရှိရသည်။
အဆိုပါ ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သော ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများကို ဘင်္ဂါလီလူမျိုး အများစု နေထိုင်သော ဘုမေရွာနှင့် သဲချောင်း ကျေးရွာများသို့ ပြောင်းရွှေ့နေကြောင်း၊ ဘင်္ဂါလီ အများစု နေထိုင်သည့် နေရာများတွင် နေထိုင်သော ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများကိုမူ သီးသန့် ပြောင်းရွှေ့ပေးခြင်း မရှိသေးသော်လည်း နီးစပ်ရာ ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ ယာယီ ပြောင်းရွှေ့ထားကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၏ မြို့တော် စစ်တွေမြို့တွင် လူဦးရေ စုစုပေါင်း နှစ်သိန်းကျော် ရှိပြီး ယင်းအနက် တစ်သိန်းကျော်မှာ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများ ဖြစ်ကြောင်း စစ်တွေမြို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာန၏ တရားဝင် စာရင်းဇယားများအရ သိရှိရသည်။
နိုင်ကျဉ်းဟောင်းအဖွဲ့မှ ကျန်ရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစာရင်းထုတ်ပြန်(Click here)
သူခိုးဖမ်းမှာ လမ်းကြားမှာလား - ပန် ကာအောက် မှာလား ...
ရင်ထဲကို အင်မတန် ထိသွားတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ကားလေး... ဇတ်ကား နံမယ်က Thief သူခိုးတဲ့ ... အကျင့်ပျက်ချစားမှုတွေ - နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုတွေ - ဆင်းရဲမွဲတွေမှုတွေ ကြီးစိုးနေတဲ့ ဒီခတ်ကြီးမှာ ထမင်းကြမ်းခဲ နဲ့ငါးကြော်လေး တကောင် ရဘို့အတွက် အသက်နဲ့ပေးဆပ်သွားရတာ ရင်နာစရာ.. သူ့ ကို ၀ိုင်းရိုက်တော့ ကျနော် လူကောင်းပါ သူခိုး မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ... အသက်မထွက်ခင် ပြန်မြင်နေတာက ထမင်းဆာလောင်နေတဲ့ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ လူမမယ် သမီးငယ်နဲ့သား ... . ဒါရိုက်တာ ငြိမ်းသစ် နဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ကဗျာဆရာတွေ ကျေးဇူးအထူးပါ ...
BY YeYint Nge ... 6/28/20120comment Links to this post
DVB TV news (28-6-2012)
အိန္ဒိယ အစိုးရသည် သူ့နိုင်ငံ အတွင်းသို့ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ တရားမ၀င် ခိုးဝင်သူများကို ပြင်းပြင်း ထန်ထန် နှိမ်နှင်းရန် အမ်ိန့်ထုတ်
သတင်း — June 28, 2012 at 2:53 pm အိန္ဒိယ နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့၏ လက်ချက်ကြောင့် ၂၀၀၉-၁၂ အတွင်း ဘင်္ဂလီအမျိုးသား ၁၅၁ ဦးသေဆုံး ထွန်းထွန်း
အိန္ဒိယ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ BSF ၏ သတ်ဖြတ်မူကြောင့် လက်ရှိ ဘင်္ဂလာ အစိုးရ သက်တမ်းတွင် နယ်စပ် တလျှောက်၌ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံသား သေဆုံးသူ ၁၅၁ ဦးရှိကြောင်း ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးမှ ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားသည်။
အိန္ဒိယ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များ အနေဖြင့် နယ်စပ်ကို တရံမလပ် စောင့်ရှောက်လျှက် ရှိကြသော်လည်း မြန်မာ နစကတပ်ဖွဲ့များမူ – ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့က ပြုလုပ် ကျင်းပသော ပါလီမန် အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး ဆာဟာရ ခါတွမ်က ထိုသို့ ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ ကျွန်မတို့က ခုလို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံသားတွေ သတ်ဖြတ်ခံနေရတာကို ကျွန်မတို့ ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ အိန္ဒိယ အစိုးရကို ပြောပါတယ်။ ဒါတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ ကျွန်မတို့ နယ်ခြား စောင့်တပ်ဖွဲ့ ဘီဒီပီနဲ့ အိန္ဒိယ ဘီအက်စ် အက်ဖ် တို့ လုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးတိုင်းမှာ တင်ပြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆက်ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံသားတွေကို နယ်စပ်မှာ သတ်ဖြတ်နေပါတယ်” ဟု ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးက ပြောသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလမှ ဇွန်လ အထိ အိန္ဒိယ နယ်ခြားစောင့်တပ် BSF လက်ချက်ကြောင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံသား ၁၁ ယောက် သေဆုံးပြီး ၂၇ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးက ပြောကြားသည်။
ယခု သေဆုံးသွားသူ ၁၅၁ ဦးမှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ဇွန်လအတွင်း အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလာ နယ်စပ်တလျှောက်တွင် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။သို့သော်လည်း နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် အိန္ဒိယကို ဝေဖန် ပြောကြားရန် ပျက်ကွက်နေကြောင်း သိရသည်။
အိန္ဒိယကမူ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံသားများ နယ်စပ်ကို တရားမ၀င် ခိုးဝင်မူကြောင့် ပစ်ခတ် နှိမ်နှင်းရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်ဟု ဆိုသည်။ အိန္ဒိယ အစိုးရသည် သူ့နိုင်ငံ အတွင်းသို့ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ တရားမ၀င် ခိုးဝင်သူများကို ပြင်းပြင်း ထန်ထန် နှိမ်နှင်းရန် အမ်ိန့်ထုတ် ထားကြောင်း သိရသည်။
စစ်တွေဈေးကြီး မွတ်ဆလင် ဆိုင်များမှ ပစ္စည်းများကို အပြင်သို့ ရွှေ့ပြောင်း
သတင်း — June 27, 2012 at 5:33 pm စစ်တွေ ဈေးကြီးရှိ မွတ်ဆလင် လူမျိုးများပိုင် ဈေးဆိုင်များမှ ပစ္စည်းများကို အာဏာပိုင်များ၏ အကူအညီဖြင့် သူတို့နေထိုင်ရာ ကျေးရွာ ရပ်ကွက်များသို့ ပြောင်းရွှေ့နေကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့ (ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့) နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ စပြီး ရွှေ့ပြောင်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။
“ နေ့လည် ၁၂ နာရီကနေ ရွှေ့နေတာ အခုအချိန်ထိ မပြီးသေးဘူး။ အခု ဒီမှာက ညနေ ၅ နာရီ ကျော်ဆိုတော့ ပစ္စည်းတွေကို ရွှေ့နေတာ ၅ နာရီ နီးပါး ရှိနေပါပြီ။ ပစ္စည်းတွေ ရွှေ့နေတုန်းပါဘဲ” ဟု စစ်တွေ ပြည်နယ် လွှတ်တော် အမတ် ဦးအောင်မြကျော်က ပြောသည်။
မွတ်ဆလင် လူမျိုးများပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို သူတို့နေထိုင်ရာ သက်ကယ်ပြင်၊ သဲချောင်းရွာများဘက်သို သယ်ယူနေကြသည်ဟု မျက်မြင်များကလည်း ပြောကြားသည်။
စစ်တွေ ဈေးကြီးတွင် မွတ်ဆလင် လူမျိုးများပိုင်သော ဆိုင်ခန်း၁၀၀ နီးပါးခန့်ရှိပြီး အများစုမှာ ဆေးဆိုင်များ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ ဈေးဆိုင် အများစုကတော့ ဆေးဆိုင်တွေများပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ကားပစ္စည်းတွေ၊ အိမ်ဆောက် ပစ္စည်းတွေ အရောင်းဆိုင်တွေ အကုန်လုံး ပါဝင်တယ်။ ဒီလို ရွှေ့ပြောင်းပီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ မွတ်ဆလင် ဆိုင်တွေစစ်တွေ ဈေးကြီးမှာ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး” ဟုစစ်တွေဈေးကြီး ငါးခြောက် ပွဲရုံ ပိုင်ရှင် တစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ စစ်တွေ ဈေးကြီးရှိ မွတ်ဆလင် ဈေးဆိုင်များမှ ပစ္စည်းများကို အပြင်သို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းမှာ အနာဂတ်တွင် ရခိုင် လူမျိုးနှင့် မွတ်ဆလင် လူမျိုးများကို ရောနှော မထားဘဲ သီးသန့်စီ ထားရန် အစီအစဉ်၏ တစိတ်တပိုင်းပင် ဖြစ်ကြောင်း စစ်တွေ ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။ မွတ်ဆလင်လူမျိုးများပိုင် ဆိုင်များမှ ပစ္စည်းများကို ရွှေ့ပြောင်းပြီးနောက် စစ်တွေ ဈေးကြီးကိုလည်း ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်မည်ဟု သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ မြို့မဈေး အတွင်းရှိသော ဘင်္ဂလီဆိုင်များမှ ပစ္စည်းများကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက စီစစ်လက်ခံရွေ့ပြောင်းသိမ်းဆည်းပေးရန် ဆောင်ရွက်နေစဉ်
Photo By: မာန်ယုကျော်
နစက ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး၏ စက်ဆုပ် ဖွယ်ရာ လုပ်ငန်းများ
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောနယ်စပ် ဒေသ လုံခြုံရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေး တာဝန်ခံ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကြီး၏ စက်ဆုပ် ဖွယ်ရာ လုပ်ငန်းများ
၈-၆-၂၀၁၂ နေ့ ဘင်္ဂါလီကုလားများ မောင်တောမြို့၌ စုဝေး ၀တ်ပြုဆုတောင်းပွဲလုပ်ရန် လက်ဆောင် ဘဏ္ဍာငွေ ရယူ၍ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကြီးမှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။
၄င်းနေ့နေ့ လည်၂ နာရီခန့် တွင်ဘဂါင်္လီ ကုလားများ ဆုတောင်း အပြီးတွင် မြို့မ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ယူနှိုက်တက် ဧည့်ရိပ်သာကို ခဲဖြင့် ပေါက်ပြီး မီးရှို့ရန် ကြံရွယ်နေစဉ် ရဲတပ်ရင်း အမှတ် ၂ တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ သေနတ်ဖြင့် မိုးပေါ်သို့ ထောင်ပစ်ခတ်သဖြင့် ၄င်းဘင်္ဂါလီလူစုမှ ရပ်ကွက် ၄ ဗိုလ်မှူးရွာ သဇင် ဧည့်ရိပ်သာ ဘက်သို့ ရွေ့ လျား စုရုံးလာပြီး ဧည့်ရိပ်သာကို မီးရှို့ ရန် အော်ဟစ်နေစဉ် နစက ကွပ်ကဲရေးမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကြီးမှာလည်း ကိုယ်ရံတော် တပ်ဖွဲ့ ဝင်များနှင့် အတူကားနှစ်စီးနှင့် ၄င်းဆူပူနေသော ဘင်္ဂါလီလူစုနှင့် ကိုက်တစ်ရာခန့် အကွာသို့ ရောက်ရှိနေပြီး အချိန်မှီ တားဆီး နိုင်ပါလျှက် မျက်ကွယ်ပြုပြီး ဆူပူမူုဖြစ်နေသော ဘင်္ဂါလီ လူစုနှင့်၂ ဖာလုံခန့် ကွာဝေးသော ဆေးရုံဝင်း အတွင်းသို့ ကားကို နောက်ဆုတ် ရပ်တန့် စဉ် အတွင်း တွင် သဇင် ဧည့်ရိပ်သာနှင့် ဗိုလ်မူးရွာ အိမ်တန်းကို မိးရှို့ ပြီး ဒေါက်တာခင်မောင်လတ်တို့တစ်အိမ်သားလုံး ကိုလည်း ဓါးဖြင့်ထိုး လုယက် အကြမ်းဖက်နေခြင်းများကို ၄င်း နစကဒုဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကြီး မှ မတားဆီးပဲ မျက်ကွယ် ပြုနေခဲ့ပါသည်။ ၄င်းနာရီပိုင်းအတွင်းမှာပဲ မောင်တောမြို့နယ်ရှိဝေသာလီရွာ၊ ရွှေရင်အေးရွာ၊ ခရေမြိုင်ရွာ၊ ကန်သာယာရွာ၊ ဗောဓိကုန်းရွာ၊ သရီကုန်ဘောင်ရွာ၊ ကိုင်းကြီးရွာ၊ မောရ၀တီရွာ များကိုလည်းမီးရှို့ လုယက် သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းမှာလည်း ၄င်းနစကတပ်ဖွဲ့ မှ နယ်စပ် တလျောက် ကုလားကျေးရွာများ၌ တဖက် နိုင်ငံမှ တရားမ၀င် GSM တယ်လီဖုန်း တစ်လုံးလျှင် ၄၀၀၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် လာဘ်ငွေယူ၍ ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂါလီ ကုလား များအား ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပြုထားခြင်းကြောင့် ဆက်သွယ်မူ အားကောင်းကာ နာရီပိုင်းအတွင်း အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို ကျယ်ပြန့် စွာလုပ်ဆောင်သွားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါအကြမ်းဖက်မူတွင် ဦးဆောင် ပါဝင်သူ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများဖြစ်သော ကမ်းနား ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် ဒီလ်လာ၊ မောင်လှမြိုင်၊ ဆော်လာမောက် နှင့် တခြားစီးပွားရေးသမား ဘင်္ဂလီ ကုလားများကို မောင်တောနယ်စပ် ဒေသလုံခြုံမှူး ကွပ်ကဲရေး တာဝန်ခံ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကြီးနှင့် အမှတ်(၁) ၀င်ထွက်ဂိတ် မောင်တော နယ်မြေခံ နစက အရာရှိများမှ ၄င်းကုလားများထံမှ လာဘ်ငွေယူပြီး သတင်းပေး အမာခံဆိုပြီး တပ်မတော်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များ မဖမ်းဆီးနိုင်အောင်အကာကွယ်ပေးနေသောလုပ်ရပ်များကိုလည်းမျက်ဝါး ထင်ထင် တွေ့ မြင် နေရပါကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချူပ်ကြီး သိသာနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။
မောင်တောဒေသခံ နစကတပ်ဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦး
( လုံးဝ တည်းဖြတ်ခြင်း မရှိဘဲ ပေးပို့သော စာအတိုင်း ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။)
BY YeYint Nge ... 6/28/2012 1 comment
သတင်း — June 28, 2012 at 9:34 pm မောင်တောတွင် လက်နက်လုယက်မှု ဖြစ်ပွါး တာကလူး
ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ်မြို့ မောင်တောတွင် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ပြန်ထားသည့်ကြားမှ လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် လုံထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးထံမှမွတ်ဆလင် (၅)ဦးက ၀ိုင်းပြီး လက်နက်လုရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွါးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“မနေ့က ညနေ (၈)နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ ဖြစ်တာပါ။ ပစ်သံပြေးလွှားအော်ဟစ်သံတွေ ကြားလို့ စုံစမ်းကြည့်တော့ ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်အနီး တံတားမှာ လုံခြုံရေးချထားတဲ့ လုံထိန်းရဲတစ်ယောက်ဆီကနေ ကုလား (၅)ယောက်က ၀ိုင်းပြီးသေနတ်လုတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်″ ဟု မောင်တော မြို့သူကြီးရပ်ကွက်နေ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်များသည် လမ်းသွားလမ်းလာများကဲ့သို့ တံတားကိုဖြတ်ကျော်လာပြီး တံတားတွင် တစ်ယောက်တည်း ကင်းစောင့်နေသည့် လုံထိန်းရဲ အနီးသို့ အရောက်တွင် ရုတ်တရက် ၀ိုင်းအုံပြီး သေနတ်ကို လုကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ လုံထိန်း တပ်သားက ပြန်လည်ခုခံပြီး သေနတ်ပစ်ဖောက်လိုက်ရာ အဆိုပါ မွတ်ဆလင်များ ထွက်ပြေးသွားကြကြောင်းသိရှိရသည်။
ထိုအခင်းဖြစ်ပွါးမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ မောင်တော ၄ မိုင် အခြေစိုက် လုံထိန်းရဲတပ်ရင်းအမှတ် (၂) ကို ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ တာဝန်ကျ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ယခုကဲ့သို့ အတည်ပြုပြောကြားသည်။
“ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တပ်ရင်းက တပ်သားပါ။ ၀ိုင်းတိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့် သူလဲ ဒဏ်ရာတွေ ရသွားပါတယ်။ ၅ ယောက်ထဲက ၄ ယောက်ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဖမ်းမိထားပါပြီ။ ကျန်တစ်ယောက်ကိုတော့ မမိသေးပါဘူး။ သူတို့ကို ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟုပြောသည်။
ထိုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် ဆက်လက်မေးမြန်းရာ ယခုအချိန်တွင် လုံခြုံရေးကို အထူးသတိထား ဆောင်ရွက်နေရသည့်အတွက်ကြောင့် အသေးစိတ်ကို မပြောပြနိုင်ကြောင်း အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။
မောင်တောတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် တခြားတိုင်းရင်းသားများကို ဆက်လက်တိုက်ခိုက်မည်ဟု ယခုလ (၂၅) ရက်တွင် စာကပ်ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ယခုတိုက်ခိုက်မှု ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မောင်တောအနီးရှိ အောင်ဗလကျေးရွာကို မီးရှို့တိုက်ခိုက်ရန် ဓါတ်ဆီများ ၀ယ်ယူစုဆောင်းနေသည်ဟု သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ်နေခြင်းကြောင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အဆိုပါကျေးရွာနှင့် မနီးမဝေးရှိ မွတ်ဆလင်ကျေးရွာတစ်ခုကို ယမန်နေ့ နေလည်ပိုင်းတွင် ၀င်ရောက်ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
မောင်တောမြို့နယ်တွင် ယခုလ ၈ ရက်နေ့က မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူများက မီးရှို့ တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ရခိုင်နှင့် တခြားလူမျိုးများ နေထိုင်နေသည့် ကျေးရွာ (၉) ရွာ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရပြီး၊ လူထောင်နှင့်ချီ၍ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။ မောင်တောမြို့နယ်တွင် အကြမ်းဖက်သူများ၏ သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် လူ (၇) ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး၊ (၅၀) ခန့် ဒဏ်ရာရှိခဲ့သည်။
မောင်တောမြို့ပေါ်ဒေသခံများ၏ အဆိုအရ ဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးလာကြသည့် ထောင်နှင့်ချီသော ဒုက္ခသည်များကို စာသင်ကျောင်းများတွင် စခန်းဖွင့် ခိုလှုံခွင့် ပေးထားဆဲဖြစ်သည်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ တည်ငြိမ်နေသော်လည်း နောက်ထပ် တိုက်ခိုက်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်မှုများရှိနေခြင်းကြောင်း လုံခြုံရေးစိုးရိမ်နေရကြောင်း သိရှိရသည်။
ရုပ်ရှင် အနုပညာရှင်များ အလှူငွေကောက်ခံမည့် အစီအစဉ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ခွင့်မပြု
ရခိုင်ပြည်နယ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရန်ပုံငွေအတွက် ရုပ်ရှင် အနုပညာရှင်များ ကိုယ်တိုင် ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့နှင့် ၃၀ ရက်နေ့များတွင် ရန်ကုန်မြို့ Junction မော်တင်၊ တော်ဝင်စင်တာ၊ Junction Square များတွင် အလှူငွေကောက်ခံမည့် အစီအစဉ်မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ခွင့်မပြုတော့၍ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း မရှိတော့ကြောင်း Messenger News Journal
ရခိုင်ဒေသခံပြည်သူများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်း အရုံးမှ ဦးဆောင်၍ အလှူငွေများ ကောက်ခံရန် စီစဉ် ထားမှုကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ တားမြစ်ခဲ့ခြင်းအား ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဒုဥက္ကဋ္ဌ သရုပ်ဆောင်လူ မင်းကို မေးမြန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
အလှူငွေကောက်ခံပွဲကို တားမြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ အစ်ကိုတို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှတ်ချက်များ ပေးချင်ပါသလဲ။ ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ထားသလဲ။
ကျွန်တော်သိရသလောက်ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးက တားမြစ်လိုက်တာလို့ သိရပါတယ်။ သူတို့ ဘက်က တားမြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ သူတို့ဘက်မှာ အကြောင်းပြချက်ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ကြော်ငြာထားတာ တစ်ပတ်ဆယ်ရက်လောက်ရှိပြီးမှ အဲဒါကို မနက်ဖြန်လုပ်မှာကို ဒီနေ့တားတဲ့အပေါ်ကိုတော့ သိပ်နားမလည်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကလည်း စီစဉ်ထားပြီးပြီ။ အလှူရှင်တွေကလည်း လှူ ကြ၊ တန်းကြဖို့ အားလုံးက စိုင်းပြင်းနေကြပြီ။ အဲဒီလို အခြေအနေမှာ ကျွန်တော်တို့အလှူခံတဲ့ အစီအစဉ်ကပျက်သွားတာပေါ့။ အလှူရှင်တွေကတော်တော်လေးကို လှူဖို့စီစဉ် ထားတယ်လို့သိရတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအလှူရှင်တွေရော ပရိသတ်တွေရော ကိုယ်တိုင်လာရောက်လှူကြဖို့ စိုင်းပြင်း ထားကြတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအစီအစဉ်ပျက်သွားတာကြောင့် နံပါတ်တစ်ကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ပြည်သူတွေရရှိမယ့်အလှူငွေတွေ အများကြီးလျော့သွားတာပေါ့။ အစိုးရက အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာမပေးဘဲ တားမြစ်လိုက်တော့ ဒေသခံတွေအတွက်ကတော့ ထိခိုက်သွားနိုင်တာ ပေါ့။ တစ်ခုရှိတာက မနက်လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတာဆို တော့ နောက်တစ်ခုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်တစ်နေရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းပြီးစီစဉ်ဖို့ကှဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီနေ့ညနေမှ သိရတာဆိုတော့ အဲဒါအတွက်ကိုတော့ လောလောဆယ်စီစဉ်ထားတာ တစ်ခုရှိတယ်။ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးအနေနဲ့ အဲဒီပွဲကမယ့် အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ပွဲကနေတဲ့အချိန်နဲ့ ပွဲမကခင်အချိန်တွေမှာ အလှူခံ အသင်းတွေထွက်ပြီးတော့ အလှူခံပေးသွားမယ်လို့တော့ စီစဉ်ထားတယ်။
လာဘ်စားပြီး မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတဲ့သူရော လာဘ်ပေးသူရော ၄/၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေအရ အပြစ်ဒဏ်ကို ထိထိရောက်ရောက် ပေးပါ
နိုင်ငံသားဖြစ်မှု. အခြေပြ ပုံစံ
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လိမ်လည်ခြင်း၊ခြိမ်းခြောက်ခြင်းတွေ ရပ်တန့်ကြစေလို
by May Thingyan Hein on Wednesday, June 27, 2012 at 11:44pm · မေသင်္ကြန်ဟိန်(မြစ်မခ)
ဇွန်လ ၂၈၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဒီမနက်စောစောမှာပဲ သတင်းတပုဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီ့း ခြိမ်းခြောက်ခံခဲ့ရသူတွေရဲ့ ကြောင့်ကြမှုတွေနဲ့ နိုးထခဲ့ရပါတယ်။
မကြာသေးမီက ကျမတို့ မြစ်မခ ၀က်ဆိုဒ်မှာ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ပညာရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မဘိန်းမြို့နယ် ဘဟဲကျေးရွာမှာ ဘုန်းတော်ကြီးသင် တောရ ပညာရေးကျောင်း ပြီးစီးရန် ပြုပြင်ဖို့အတွက် လိုအပ်နေတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်မကောင်းမရာတွေ ကြားခဲ့ရပါတယ်။
မဘိန်းမြို့က၊ ဘဟဲကျေးရွာမှာ တကယ်ကို ဘုန်းတော်ကြီးသင် တောရ ပညာရေးကျောင်းဖြစ်မြောက်ပြီးစီးရန် လိုအပ်နေတဲ့အတွက် ကျေးရွာဒေသခံတွေရဲ့ အကျိုးကို ကြည့်ပြီး ကျမတို့ မြစ်မခ သတင်းထောက်က ရေးသားခဲ့တာပါ။
အဲဒီသတင်း တက်သွားပြီးနောက်မှာ အဲဒီသတင့်းပေးခဲ့တဲ့ သတင်းရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတွေကို သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အချို့က ခုလို စာသင်ကျောင်းမပြည့်စုံ တဲ့ သတင်းက ရပ်ရွာကို သိက္ခာကျစေကြောင်း ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ ကြားရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့က စာသင်ကျောင်းနဲ့ ကျောင်းအတွက် လိုအပ်ချက်တွေ ပြည့်စုံကြောင်း သက်ဆိုင်ရာတွေက သတင်းရင်းမြစ်ကိုပဲ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ခဲ့တယ်လို့လည်း ကြားသိရပါတယ်။
ဒီကိစ္စကို ကြားရတော့ ကျမတို့ တိုင်းပြည်အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
ခုလိုမျိုး ပြည်သူလူထုကို ခြိမ်းခြောက်ပြီး လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခြင်း အကျင့်တွေကို မပြင်နိုင်သေးတာကို မြင်ရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရခြင်းအပြင် ရင်လေးမိပါသေးတယ်။
လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလတွေမှာ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ Good Governance ၊ Clean Government အဖြစ် ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ အစိုးရနဲ့အာဏာပိုင်တွေအပေါ်မှာ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ မယုံကြည်ခြင်းစတဲ့ ခံစားချက်တွေထက်၊ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရကို နှစ်သက်ခြင်း၊ ယုံကြည်အားကိုးခြင်း စတဲ့ ခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာအောင် အစိုးရအဖွဲ့များအနေနဲ့ ကြိုးစားကြရမဲ့ကာလတခုပါ။
ခုလိုမျိုးကာလတွေမှာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေက မြို့နယ်အဆင့် သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေတာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ ပြည်သူလူထုကို ခြိမ်းခြောက်တာမျိုး မလုပ်သင့်သလို၊ လိမ်လည်ပြီး လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာမျိုးဟာ နိုင်ငံတော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကို သိက္ခာကို ကျဆင်းစေတဲ့ လုပ်ရပ်လို့လည်း သုံသပ်မိပါတယ်။
ခုလို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ခြောက်လှန့်တောင်းယူခြင်းဟာ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၄၆၅ မြောက်ပါတယ်၊ မမှန်မကန်စာရွက်စာတမ်းပြုလုပ်ခြင်းကလည်း ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေအရ အရေးယူလို့ရတဲ့ကိစ္စကြီးပါ။ ဒါတွေကိုလည်း လူကြီးမင်းတို့ သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။
တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် လိုအပ်ချက်တွေ မီဒီယာပေါ်တက်လာတာဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ရှက်စရာ၊ သိက္ခာကျစရာမဟုတ်ပါဘူး။ လိုအပ်ချက်တွေ မပြည့်စုံမှုတွေကို ၀ိုင်းဝန်းဖြည့်ဆည်းပြီး တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးစားပေးရမဲ့ အချိန်ပါ။ အစိုးရနဲ့ ပြည်သူ ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်ရမဲ့ကာလတခုပါ။
ကျမတို့ ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲကြတယ်ဆိုတာ အားလုံးက သိပြီးသားပါ၊ ခုလို မျိုး မပြည့်စုံတဲ့ အခြေအနေတခုကို ဖုံးကွယ်ချင်လို့ ပြည့်စုံချင်ဟန်ဆောင်ပြီး၊ အားလုံးကောင်းပါသည်၊ ပြည့်စုံပါသည် လုပ်ခြင်းကသာ တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲကျအောင် လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပြည်သူတယောက်ကို ခြိမ်းခြောက် လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခြင်းကသာ ရှက်စရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း လူကြီးမင်းတို့ကို သဘောပေါက်ကျစေချင်ပါတယ်။
ကျမတို့ တိုင်းပြည် ဟာ ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်အဖြစ်နဲ့ တင့်တယ်ဖို့ကတော့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ မရိုးသားသော အကျင့်ဟောင်းတွေကို အရင်ပြင်ဖို့ လိုပါတယ်။
ပြည်သူတွေအပေါ်ကိုလည်း မလိမ်သင့်သလို၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ကြီးလေးသော တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ နိုင်ငံတော်အဆင့်ဝန်ကြီးများနှင့်သမ္မတအပေါ်မှာလည်း လိမ်လည်ခြင်းတွေ ရပ်တန့်ကြစေလိုပါတယ်။
အီဂျစ်များ ယနေ့ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြမှုနောက်ဆ...
အခြေအနေဆိုတာက နေ့ချင်းညချင်းမှာ ပြောင်းသွားနိုင်တာ...
အမေစုနဲ့ပြင်သစ်ကို ရောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေေ...
အိန္ဒိယ အစိုးရသည် သူ့နိုင်ငံ အတွင်းသို့ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ...
နစက ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး၏ စက်ဆုပ် ဖွယ်ရာ လု...
ရုပ်ရှင် အနုပညာရှင်များ အလှူငွေကောက်ခံမည့် အစီအစဉ်...
လာဘ်စားပြီး မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတဲ့သူရော လာဘ်ပေးသူရော...